Inona no ho vokatr'izany Brexit amin'ny ho avy? | Vaovao momba ny dia
Tamin'ny 23 Jona dia nanao fitsapan-kevi-bahoaka ny Great Britain izay nanohana ny fivoahan'ny firenena avy amin'ny Vondrona Eropeana taorian'ny nananganana azy efa-polo taona. Na eo aza ny zava-misy dia nanondro fandresena ho an'ireo mpanohana ny faharetana ny birao fandatsaham-bato, tamin'ny farany dia mbola tsy nisy izany. Izany dia nitondra vokany maromaro, toy ny fametraham-pialan'ny praiminisitra anglisy David Cameron, na ny horohoron-tany nitranga teo amin'ny tontolon'ny ara-bola ary koa ny tsy fahazoana antoka ara-politika, toekarena ary ara-bola lehibe ho an'i Great Britain.
Brexit no ivoahan'ny UK avy amin'ny EU, manondro kilalao amin'ny teny noforonin'ny teny hoe Britain and Exit. Raha vantany vao vita izany, dia tokony apetraka ny fe-potoana roa taona handaminana ny fivoahana ary hametraka ny rafitra vaovao amin'ny fifandraisana amin'ny Vondrona Eoropeana, izay tokony hifidianan'ny firenena mpikambana.
Koa satria i Angletera dia iray amin'ireo toerana itiavan'ny mpizahatany espaniola eto ambany Hodinihintsika ny sasany amin'ireo vokatra mety hitranga Brexit amin'ireo mpandeha izay te-hitsidika an'i Britain.
4 Seranam-piaramanidina tena nirodana
5 Mpianatra any UK
6 Mpiasa any Great Britain
Aorian'ny Brexit, lafo kokoa ny miresaka amin'ny finday avy any Great Britain. Tamin'ny taon-dasa dia noteren'i Bruxelles hanafoana ny tahan'ny fivezivezena ny volana jolay 2017, izany hoe, ny sandam-bola fanampiny aloan'ny mpanjifa rehefa mampiasa ny findainy hifandray amin'ny Internet na hiantso avy any ivelany izy ireo. Ny fialan'ny Fanjakana Angletera tamin'ny Vondrona eropeana dia manafoana izany adidy izany raha tsy ny mpandrindra anglisy OFCOM mihitsy no manapa-kevitra ny hiditra an-tsehatra amin'ny taha, afaka malalaka ny orinasan-telefaona hametraka azy ireo amin'ny vidiny heveriny fa mety.
Araka ny kajy nataon'ny Ministeran'ny Toekarena anglisy, Brexit dia hanao antso folo minitra ho an'ny United Kingdom lafo kokoa amin'ny 5,16 euro raha ampitahaina amin'ny antso natao tany amin'ny firenena eropeana iray hafa. Na izany aza, azo heverina fa ny fiatoana niaraka tamin'ny Vondrona Eropeana dia tsy midika fiakaran'ny vidim-piainana, satria ny orinasa sasany toa an'i Vodafone dia nisafidy ny handroso ary hanafoana ny fivezivezena any Eropa sy Etazonia ho fitakiana ara-barotra.
Tamin'ny taon-dasa dia nahazo mpizahatany britanika maherin'ny 15 tapitrisa i Espana, izay 21% teo ho eo tamin'ny vola niditra tamin'ny fizahantany. Tamin'ny voalohany, Brexit dia tsy nanova ny safidin'ny Anglisy ho an'ny Espaniôla handany ny fialan-tsasatra satria izy ireo dia mahatoky amin'ny moron'ny Nosy Balearic, ny Nosy Canary ary Andalusia.
Na izany aza, amin'ny fihenan-tsasatry ny kilao, ny fialan-tsasatrao any Espana dia tsy hahazo tombony intsony satria lasa lafo kokoa. Hisy vokany amin'ny faharetan'ny fijanonany izany ary handany vola kely kokoa izy ireo rehefa mitsidika ny firenentsika. Izay mety hitera-doza ho an'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny espaniola amin'ity lafiny ity.
Miala amin'ny Vondrona Eropeana i Etazonia, hiova ny politikam-pifindra-monina ary amin'ny ho avy dia mety tsy ho afaka hivezivezy afa-tsy amin'ny antontan-taratasy momba ny mombamomba ny firenena sisa mpikambana. Amin'izany dia ilaina ny mitondra ny pasipaoronao, toy ny rehefa mandeha any amin'ny firenena hafa ivelan'ny Vondrona eropeana.
Na izany aza, ny minisiteran'ny raharaham-bahiny dia manana fampahalalana amin'ny antsipiriany sy manavao ny antontan-taratasy izay tokony hoentina rehefa mandeha any amin'ny firenena tsirairay manerantany.
Seranam-piaramanidina tena nirodana
Hatramin'izao, ny filaharana teny amin'ny seranam-piaramanidina hidirana any Londres dia nifindra haingana ary tsy niandry ela, ny ampahany betsaka satria ny olom-pirenen'ny Vondrona Eropeana dia afaka niditra tamin'ny làlana misaraka nefa tsy nisy fameperana.
Aorian'ny Brexit dia mety hiova ny toe-javatra, na dia tsy fantatsika aza ny fepetra amin'izao fotoana izao. Lucas Petherbridge, mpitantana ny fifandraisana amin'ny daholobe an'ny Association of British Travel Agents (ABTA) dia mino an'izany ary mino fa hanome vola betsaka kokoa i UK mba hisorohana ny andalana lava ary hijanona ho toy izany ny fotoana fiandrasana. Ny tsy hiova dia ny fizotry ny fidirana amin'ny lamasinina na sambo.
Mpianatra any UK
Alohan'ny tsy nandoavan'ireo olom-pirenen'ny Vondrona Eropeana saram-pianarana feno fa Miaraka amin'ny Brexit dia terena handoa saram-pianarana feno ny mpianatra ary tsy hanana fidiram-bola amin'ny fianarany. fa mandraka ankehitriny dia afaka mandray izy ireo. Ny vatsim-pianarana Erasmus, ankafizin'ny mpianatra eropeana an'arivony, dia hanjavona any UK ihany koa. Noho izany, ny mpianatra britanika dia tsy afaka mandray ny iray amin'ireto vatsim-pianarana ireto any amin'ny firenena eropeana hafa ary ny mifamadika amin'izany.
Mpiasa any Great Britain
Iray amin'ireo firenena nisafidy ho an'ny Espaniôla ny Fanjakana Mitambatra raha ny amin'ny fivoahana hitady asa. Mandritra ny taona vitsivitsy ho avy, ny fifampiraharahana dia hamaritra hoe hanao ahoana ny fepetra ho an'ireo mpiasa tsy Britanika ao amin'ny firenena. ary ny fomba hamahana ny olan'ny fivezivezena maimaim-poana ho an'ny olona vokatry ny maha mpikambana azy ao amin'ny UE, izay nisy hatramin'izao.
Ho fanampin'izay, ny fahazoan-dàlana sy fanampiana izay nankafizin'izy ireo tany dia noho ny satan'izy ireo olom-pirenena ao anatin'ny Vondrona sy ny fifanarahana vita sonia Miaraka amin'ny Brexit dia mety hifarana ireo fotodrafitrasa ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no ho vokatr'izany Brexit amin'ny ho avy?